Gabadhi ugu horreysay oo telefishin madax bannaan ka furtay Jigjiga - BBC News Somali
Filsan Cabdullaahi Axmed
"Deegaanka Soomaalida waxyaabaha sida weyn uu ugu baahan yahay waxaa ka mid ah warbaahin. Deegaanka soomaalidana waxaa ka jirta baahi warbaahineed oo aad u weyn. Warbaahinta keli ah ee deegaanka ka jirtana waa warbaahin ay dowladda leedahay" ayey tiri Filsan.
Telefishiinka 'Nabad' ayaa noqday telefishiinki ugu horreeyey oo gaar loo leeyahay oo deegaanka Soomaalida ka howlgala ayna aasaasto gabar Soomaali ah.
Dhallinyaro is abaabushay ma soo afjari karaan colaadda xadka Oromada iyo Soomaalida?
Xaaladda isbitaalka Jigjiga oo laga deyrinayo
Dagaalladi labada qowmiyadood dhexmaray si loo soo afjaro iyada oo kaashaneyso dhalinyaro 300 ka kooban oo labada qowiyadood ka soo kala jeedda ayaa waxay xustay iney horay u diyaarisay masraxyo ay ugu magac dartay "Masraxyada iscafinta iyo Midnimada".
Dhalinyarada qowmiyadaha Oramada iyo Soomaalida dalka Itoobiya ayaa wada dadaalo nabadeed.
"Si aan u sameeyo warbaahin madax bannaan oo shacabka u taagan oo ay shacabku ku wada xiriiraan ayaan go'aansaday waxaanna sameeyey Nabad TV" ayey tiri.
Dhibka ugu weyn ee ay la kulantayna waxay ku sheegtay inuu ahaa marki ay dadka la wadaagtay iney aasaasayso telefishiin madax bannaan in lala yaabay oo lagu yiri "Warbaahin ay dowlad laheen, oo gaar loo leeyahay, oo shacabka u adeegaya" ay dadku qaadan waa ku noqotay.
'Doorka Soomaalida ay ku leedahay siyaasadda dalka Itoobiya'
"Dad badan oo ku nool deegaanka Soomaalida intooda badan ma aaminsana iney Itoobiyaan yihiin, si marka arrimahaasi wax looga baddalo waa iney dowladda laamaha kala duwan ay qaadaan tallaabbooyin wax ku ool ah" ayey tiri.
"Deegaanka Soomaalida wuxuu leeyahay aqoonyahanno deegaanka Soomaalida iyo dalka intiisa kalaba anfacaya. Marka waa in la helaa nidaam dadkaasi u suuragelinaya ka qayb gal ballaadhan u horseedi kara". ayey tiri Filsan Cabdullaahi Axmed.
Dhallinyaro is abaabushay ma soo afjari karaan colaadda xadka Orommada iyo Soomaalida?
Iyadoo ay dagaalahan jiraan ayaa dhalinyarada qowmiyadaha Oramada iyo Soomaalida dalka Itoobiya waxa ay wadaan dadaallo nabadeed.
13 Nofembar 2018